Amaanka Magaalooyinka Baydhabo iyo Muqdisho oo gooni-gooni looga shiray Laguna wado Qorshayaal | Wahel Kaga Koowaad ka dhigo Badweyn	Wednesday, June 19th, 2013	Home
Amaanka Magaalooyinka Baydhabo iyo Muqdisho oo gooni-gooni looga shiray Laguna wado Qorshayaal
Number of View :1248Kulan looga hadlayay sidii loo horumarin lahaa ammaanka magaalada Muqdisho oo ay ka qaybgaleen mas’uuliyiinta wasaaradda arrimaha gudaha iyo culimo ayaa maanta lagu qabtay magaalada caasimadda ah.
Kulanka waxaa qabanqaabisay wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga qaranka oo maalmihii ugu dambeeyay wadday dedaallo la xiriira sare u qaadidda ammaanka Muqdisho oo ay ururrada bulshada rayidka ah ay kala xaajoonaysay.
Wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka ee xukuumadda Somalia Cabdikariim Xuseen Guuleed oo kulanka ka hadlay ayaa culimada kula dardaarmay inay ka qaybqataan sugida amaanka, isla markaana ay ku dedaalaan fidinta diinta.
Dhinaca kale, kulan ku saabsanaa xaqiijinta ammaanka magaalada Baydhabo oo ay ka qaybgaleen wasiirro ka tirsan xukuumadda Soomaaliya iyo qaybaha bulshada ayaa maanta lagu qabtay xarunta gobolka Baay.
Wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka ee xukuumadda Soomaaliya Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa tilmaamay in qaybaha bulshada ay ka dhagaysteen warbixino kala duwan oo cabaashooyin u badnaa.
Waxa uu xusay inay wax ka qabandoonaan cabaashooyinka shacabka ee ku aaddan dhanka maamulka, isagoo sheegay inay gacan bir ah ku qabandoonaan kooxaha isku dayaya inay carqaladeeyaan ammaanka gobollada dalka.